Toerana itodiana El Salvador sy Avianca: fijanonana 48 ora - hoy ny fanazavan'ny minisitry ny fizahantany
Home » Travel Associations News » Toerana itodiana El Salvador sy Avianca: fijanonana 48 ora - hoy ny fanazavan'ny minisitry ny fizahantany
Tao amin'ny tsenan'ny fizahan-tany eran-tany (WTM) El Salvador dia nivoaka mba hampahafantatra ny ora lavorary 48 izay tokony handraisan'ny mpandeha avianca tsiro an'io Firenena Amerikanina Afovoany io ary ny traikefa fizahan-tany haingana.
Nalamin'ny masoivoho El Salvador any UK, ny minisitry ny fizahan-tany El Salvador, Hon. Andriamatoa José Napoleón Duarte miaraka amin'i Sigfrido Reyes avy amin'ny PROESA Investment Organisation sy ny solontena Beatriz Contreras avy ao amin'ny Chambre fizahan-tany El Salvador dia nanasa ny fampahalalam-baovao sy ny varotra nisakafo antoandro ny alatsinainy teo mba hampahafantarana ny programa fijanonana Avianca.
Rehefa avy nijery ny famelabelarana dia hita fa i Salvador dia zava-dehibe kokoa noho ny toerana fijanonana. Mampiseho ny fitambarana natiora sy morontsiraka mahavariana, surf, fitsangantsangana, fiakarana tendrombohitra ary kolontsaina tsy manam-paharoa, teaser fotsiny ny 48 ora.
Avianca dia zotram-piaramanidina manan-danja miaraka amin'ny foibe any San Salvador, renivohitra El Salvador. Avianca dia hitsahatra tsy handoa sarany fijanonana ho an'ny mpandeha maniry hanararaotra fialantsasatra fohy tsy mihoatra ny 48 ora. Ho fanampin'izay, tsy hampandoavin'ny governemanta hetra 37.00 dolara amerikana. Ny mpandeha dia mila mamandrika fitsangatsanganana mba hahazoany ny haba haba.
Ity programa ity dia natao hampitomboana ny fahalianany any El Salvador amin'ny maha-fizahan-tany fizahan-tany amin'ny famporisihana ireo mpandeha fitaterana maro hanandrana ny firenena.
Betsaka ny zavatra azo tsapain-tanana, tsy ny Beer Brewing Tour ihany na ny fitsidihana sakafo. Traikefa nahafinaritra i El Salvador, ao ny sokatra, volkano, valan-javaboary, tanàna marobe - ny fampifanarahana an'io ao anatin'ny 48 ora no hany fanamby.
Rodrigo Moreno avy any Salvadorean Tours nilaza tamin'ny eTN:
Safidy mety tsara ho an'ny mpandeha izany mba handaniany fotoana betsaka mandritra ny fifandraisan'izy ireo ao amin'ny Seranam-piaramanidina Iraisam-pirenena El Salvador. Mandritra ny ora 5 farafahakeliny, ny mpitsangatsangana dia afaka mitsidika hetsika maro toa ny tanànan'i San Salvador, Volkano San Salvador, mitsidika tranokala voaaro UNESCO, mankafy amoron-dranomasina na mihinana lovia malaza nasionaly sy malaza eran'izao tontolo izao: "Las Pupusas". Ao amin'ny Salvadorean Tours, manolotra traikefa tsara indrindra ho an'ny Layover any San Salvador izahay. Fanampin'izany, handrindra tetezamita haingam-pandeha haingana ao anaty seranam-piaramanidina izahay mba tsy handanianao fotoana amin'ny filaharana lava sy hankafizanao ny fitsidihanao. ”
Ho an'ny sasany StopOver, hevitra kitiho eto.
Minisitry ny fizahantany Maorisy andro be atao ao amin'ny WTM
Etihad Airways: tantara 10 taona miaraka amin'ny Nepal Aviation sy fizahan-tany